I-CBD Nesifo Sikashukela - Ukuvuselela Ushukela Wegazi | Kuhle kakhulu ngo-2020
I-CBD Nesifo Sikashukela - Kusetshenziswa uwoyela we-CBD ekuvuseleleni ushukela wegazi | Umkhiqizo omuhle kakhulu 2021
I-CBD Nesifo Sikashukela: Kusetshenziswa uwoyela we-CBD ukuvuselela ushukela wegazi
Uhlelo lwe-cannabinoid luhlobene noshukela wegazi
I-CBD nesifo sikashukela: Ukukhululwa kwezimpawu zesifo sikashukela nge-CBD
Isayensi ibilokhu icwaninga ngama-cannabinoids maqondana nokwelapha izimpawu nezimbangela zesifo sikashukela. Ukugcina uhlelo olulinganiselayo lwe-homeostatic kubonakala kuyisihluthulelo sokwelashwa okusha kwalesi sifo ngokususelwa kumakhemikhali e-cannabis Sativa. Yize lungekho ikhambi okwamanje, ezinye zezimpawu zalo zingancishiswa ngezimbali ze-hemp kanye nezicucu.
Isifo sikashukela siyisethi yezifo ze-metabolic ezibangelwa ukungakwazi komzimba ukulawula inani likashukela, ikakhulukazi i-glucose, egazini. Amazinga eglucose alawulwa ngamahomoni afana ne-insulin, ekhiqizwa kumanyikwe. Isifo sikashukela singadala izinkinga ezinkulu zesikhathi eside, njengesifo senhliziyo, isifo sohlangothi, noma ukulimala kwezinso namehlo.
Eminyakeni yamuva nje, ucwaningo olwengeziwe luyaqhubeka luqinisekisa ubufakazi obususelwa ezinhlwini zabantu abanesifo sikashukela futhi obukhombisa lokho uwoyela CBD kunemiphumela ezuzisayo. Izici ezilwa nokuvuvukala ze-CBD kanye ne-THC, zinciphisa ukuvuvukala kwemithambo yegazi, uphawu oluvame kakhulu lwesifo sikashukela, kanti umphumela waso wokuvikela umzimba wehlisa ukuvuvukala kwemizwa nobuhlungu.
Ama-cannabinoids nawo asebenza njengama-vasodilator, enza ngcono ukujikeleza kwegazi futhi asebenzise umsebenzi we-antispasmodic emisipheni nasesimisweni samathumbu. Isifo semilenze esingazinzile esidalwa yisifo sikashukela singancishiswa nensangu, okwenza iziguli zilale kangcono. Ucwaningo lwakamuva lwelabhoratri lukhombisile ukuthi uhlelo lwe-endocannabinoid lungabhekana nokuqinisa izinga likashukela egazini, okuyinkinga enkulu yalesi sifo. Ngeshwa, kumane kungukucwaninga kwelabhorethri; njengamanje alukho umuthi osuselwa ku-cannabinoid wesifo sikashukela.
Yize kudingeka ucwaningo lomtholampilo nabantu, ukuhlolwa kwelabhorethri kukhombisile ukuthi kunokuhlobana okuqinile phakathi kwesifo sikashukela kanye ne-cannabinoids. Noma kunjalo, ezinye izifundo ezibonisa umthelela wohlelo lwe-endocannabinoid kwesifo sikashukela lwenziwe, futhi bafinyelele eziphethweni ezinjenge-cannabidiol kunciphisa izehlakalo zesifo sikashukela kumagundane esifo sikashukela angakhuluphele. Ngokwezifundo ezithile, i-CBD ivimbela futhi ibambezele i-insulitis eyonakalisayo kanye nokukhiqizwa kwama-cytokines okuvuvukala, okuholele ekutheni kube nesifo esiphansi sesifo sikashukela.
Abanye abaphenyi bakhuluma nangendlela engenzeka yokuzivikela yokuzivikela eyenziwe yenziwe yi-CBD. Le hypothesis iqinisekiswa ngokunye okutholakele nge-cannabidiol nangokucwaninga okutholile imiphumela ethile yokuvikela i-CBD kwimodeli yokulinga yesifo sikashukela. Olunye ucwaningo luthole nokuthi i-CBD inciphisa ukungasebenzi kahle kwenhliziyo kumagundane ane-cardiomyopathy yesifo sikashukela.
Ngaphandle kwamalabhorethri nasekhaya labagulayo abanesifo sikashukela, sithola zonke izinhlobo zobufakazi bokuthi ama-cannabinoids ayasebenza ekwelapheni izifo zamehlo, ubuhlungu obungapheli, ukuphazamiseka kokulala, nezinye izifo ezihlobene nesifo sikashukela. Ukuthi isiguli sikashukela siphathwa kanjani kuncike ekutheni sinezinye izinkinga yini nempilo yaso jikelele. Ezinye iziguli zengeza izindlela zazo zokwelapha ze-cannabinoid.
Uma ungumsebenzisi we-CBD futhi onesifo sikashukela, kufanele wazi ukuthi lokho kungasivuthisa isifiso sakho sokudla ekuqaleni, kepha ngokuhamba kwesikhathi, kunomphumela ohlukile futhi kungavikela ekukhulupheleni. Ukukhishwa kwe-cannabis ngezilinganiso ezahlukahlukene ze-THC, I-CBD, namanye ama-cannabinoids nama-terpenes, noma i-CBD kuphela, kucatshangwa ukuthi kuyasiza empilweni yezempilo nenhliziyo.
Lezi zinsangu ezifanayo ze-cannabis noma ze-hemp zingasetshenziselwa ukulungiselela okhilimu bezinhlobonhlobo abaqeda ubuhlungu be-neuropathic obuvame ukuhlotshaniswa nesifo sikashukela. Ngakolunye uhlangothi, ingozi ongahle ubhekane nayo njengomsebenzisi we-CBD kanye neziguli zesifo sikashukela yi-hypoglycemia, ngoba kusatshwa ukuthi amazinga e-glucose azokwehla ngaphandle kwesiguli ukukuqaphela kuze kube yilapho sekwephuze kakhulu.
Zonke izinhlobo zokuzivocavoca ezenziwa njalo, kanye nokudla okunempilo futhi okunomsoco kuzonciphisa ubungozi besifo sikashukela futhi kusebenze ukulawula izinga likashukela egazini labantu abanalesi sifo. Abanesifo sikashukela kufanele futhi balinganisele noma bayeke ukusetshenziswa kotshwala nogwayi.
PreviousPost Previous:Ziyini Izinzuzo ze-CBD?OlandelayoPost Next:Yini uwoyela we-CBD? | Umkhiqizo omuhle kakhulu ka-2021